Mgbe ọ bụla ị nwere ihe onwunwe na-edebe usoro nke ị chere na ọ bara uru ma nwee ọnụahịa na uche gị n'oge niile ị ga-ere ya. Iwuru Pọtụfoliyo bụ ọrụ na-enye afọ ojuju ma ị nweghị ike ịga na-ezighị ezi na-enweta ezigbo uru.
Ịkwesighi itinye onwe gị n'ọnọdụ ebe ị na-agaghị ere otu ihe onwunwe, ọ dịghị ihe dị njọ ịnweta ọnụahịa dị elu ma ọ bụ ịtọ ntọala nke ọ na-abaghị uru maka ire ere nanị ịzụta azụ n'ime ụlọ ahụ. ahia ma nwee nsogbu nke ịchọta ihe onwunwe ọzọ.
Ọnụ ego ị nwere ike ime ka ọ dị mkpa ka i chebara ihe niile metụtara njide, ire na ịzụta azụ. Ma n'ebe ahụ bụ ọnụahịa ebe ọ ga-aka mma ire, Nke a bụ ụgwọ ị kwesịrị ịma ma ọ bụrụ na ọ bụ enweghi ike iru oge.
Nke a na-eme ka ị nọrọ n'ụwa n'ezie ma kwụsị gị ịrapagidesi ike n'otu echiche, ka ndị nọ na ụlọ ọrụ ahụ mara na ihe onwunwe gị na-ere mgbe niile "na ọnụahịa dị mma", ikekwe nwere akwụkwọ e biri ebi na ngwaahịa & ọnụ ahịa, i nwere ike nwee ihe ijuanya ihe onye zụrụ ihe ziri ezi dị njikere ịkwụ ụgwọ.
Cheta na enwere ugwo nke a na-achota nke a ga-ugwo maka mmadu ka o nweta mpiota nke ihe ndi di nma, ka ugwo nke itinye ihe onu ahia gi na oge & ego enwere ike igbakwunye na ihe bara uru ma bụrụ onye onye na-azụ azụ nabatara, ị ga-etinye ya nke ọma maka onye "ogbenye ọgaranya ego".
Ihe niile maka ire ere
Na ezigbo ego!
(ma ọ bụ kwesịrị ịbụ!)